India: mukana wezvikwereti | Ehupfumi Zvemari
India? Kunze kwekuve nyika yakanaka yekushanyirwa chero nguva yegore, ndiyo imwe yeiyo dzimwe nzira dzinopihwa nemari kuchengetedza mari. Kusvikira makore mashoma apfuura zvaive zvakanyanya kana kushomeka kuisa pfungwa pamusika wemasheya mumisika yemari yenyika. Vakuru chete ndivo vakasarudza kusiya miganhu yedu kuyedza kugadzirisa iyo goho yekufamba kwavo mumisika yemari iyi. Asi kudyidzana kwepasi rose kwehupfumi hwese zvakare kwauya kuzokanganisa varimari vadiki nepakati.
Kutengesa misika yepasi rose yemari zvino zvave nyore. Izvo zvinogona kuitwa kubva pabhenji rako raunowanzoita, kunyangwe nenzvimbo dzinoshamisa dzekunze dzaunogona kuwana panguva ino. Vamwe vacho vari Nzvimbo dzisinganzwisisike sevamwe vemuAfrica kana kunyange nyika dzeAsia. Asi kune imwe iri kuwedzera simba mumakore apfuura. Icho hachisi chimwe kunze kwemusika weIndia wemusika, chimwe chezvishamiso zvikuru zvakaunzwa nenyika dzepasi rose.
Izvo hazvina kuita senge zvakapfuura kwaive kwakaomesesa kuvhura zvinzvimbo munyika ino yakakosha mukondinendi yeAsia. Iye zvino mashandiro aya anogona kuve akaomeswa chero nguva uye mamiriro. Nechakashata chete icho mashandiro ayo ekutenga nekutengesa aripo mamwe makomisheni akawedzera pane mumusika wekuSpain wemusika kana misika yeiyo euro zone. Iko mitengo yemabasa aya inogona kupetwa kaviri. Icho chinhu chaunofanira kuvimba nacho kana iwe uchida kuisa mari yako mune ino kuenda kubva zvino zvichienda mberi.
1 India: goho repamusoro
2 Ngozi dzekushanda uku
3 Zvakanakira kuisa mari muIndia
4 Chii chekuita nemabasa ako?
5 Dzimwe nzira dzekudyara munyika ino
6 Matipi ekudyara muIndia
India: goho repamusoro
Iyo Indian stock market iri kuumba kuti ive imwe yeanonyanya kusheedzera pasirese. Iko zvinzvimbo zvevatengi zviri kuisa pachena kune izvo zvevatengesi. Yayo huru index inoratidza a kuongorora zvakare kweanopfuura 50% Mumakore apfuura. Nekuchinjiswa kwekukosha kwemari kuyerera kubva kumarudzi ekumadokero ayo ari kuda kuvhura zvinzvimbo mune zvimwe zvekuchengetedzeka zvakanyorwa mumusika uyu wakakosha wezvemari.
ari matanho akasununguka inotungamirwa nemukuru weIndia ndechimwe chezvikonzero zvinotsanangura kukwira kwemitengo yemasheya ayo makuru. Mune zvimwe zviitiko, pasi pezvikamu zvisingafungidzike mumisika yekumadokero emasheya. Chokwadi ichi chiri kukonzeresa uye vazhinji vadiki nevepakati varimi kuti vatarise pamusika wemusika uno. Icho hachisi chiito chekunze, asi pane izvo zvinoumba zano rinobatsira kwazvo kuita mashandiro anobatsira pamusika wemasheya.
Munzira dzese, haisi nzvimbo yekuenda inochinjirwa kune ese profiles evaridzi. Kwete zvakanyanya kushoma, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti zvirokwazvo, havazi vese vanogona kusarudza kuendesa nhumbi dzavo kuIndia. Ivo chete vashandisi vane kushivirira kwakanyanya kwenjodzi ndivo vanogona kutanga rudzi urwu rwemabasa akakosha. Uye zvakare, ichashanda kugadzirisa chikamu chidiki cheiyo portfolio, haina kumboita sekudyara kukuru. Iyi ndiyo nheyo iyo zviito zvevashambadzi vese zvinofanirwa kutongwa. Chero kukanganisa kupi mune izvi kunogona kukudyira iwe kupfuura kushamisika kwakashata kubva zvino zvichienda mberi.
Zvakare kusaziva kukuru kwemakambani avo kunogona kuva mutoro mukuru wekuita mashandiro mumusika uyu kushomeka kusvika zvino. Kusvika pakuti iwe uchazoda zano chairo nenyanzvi mumisika yemari. Saka kuti iwe ugone kufambisa ese mafambiro anoitwa kubva pakutanga. Kune rimwe divi, shanduko yemari yekushanda mumisika iyi ichave imwe yemhedzisiro yakaipa yekusarudza uyu musika wemari kusvika ikozvino kubva kwatinoenda. Nekuti zvirizvo, zvinoreva mutengo mutsva kugadzirisa chishuwo ichi chiripo mune vamwe vevatengesi vane hukasha.
Zvakanakira kuisa mari muIndia
Kune rimwe divi, kune akawanda mabhenefiti ayo anoverengeka mashandiro emabasa anogona kuunza zvinopfuura zvinoshamisa kune vese makambani vanotsigira chirongwa ichi. Ehezve, imwe yeakanyanya kurara mukuti iwo makuru masheya indices ari kunyoresa a kukura kwakatsiga uye kwakasimba. Nerubatsiro rwakakosha rwekuva nemwero wakaderera wekuwedzera kwemitengo. Ichi chinhu chekupedzisira chiri kuve chakanakisa kusimudzira kutenga mumisika yemari ine akakosha mazinga mukuita.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa pasi pechero mamiriro ezvinhu kuti kunoshandiswa chaiko kuri kugadzirwa muhupfumi hwayo. Uye semhedzisiro yeizvi, iri kusvika mhedzisiro yemakambani akanyorwa ayo vari kuratidza mukushanduka kwemitengo yavo. Nekwakakurumbira kukoshesa mumutengo wemasheya ayo. Iko kuuya kwevatengesi kubva kunze kwenyika kuri kuwedzera uye kuwanda. Muchidimbu, ndeimwe yemisika yemari inobatsira kwazvo mumakore matatu apfuura. Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndizvo zvichaitika kubva zvino zvichienda mberi.
Chii chekuita nemabasa ako?
Mubvunzo wauchanyatso kuve uchizvibvunza iwe izvozvi ndewako danho rako rekudyara rinofanirwa kuve remwedzi iri kuuya. Zvakanaka, mupfungwa iyi ndeimwe yemisika yemasheya kwauinayo mikana mikuru kuvandudza yako yekutarisa account balance. Ehe zvakanyanya kupfuura mune echinyakare kana echinyakare. Nekudaro, uye mushure mekukwira kwakawanda kuri kuramba kuchiitika mumusika wemasheya, njodzi ndeyekuti kugadziriswa kwemitengo kwakakura kunogona kugadzirwa. Neichi chikonzero chaicho, hauzove nesarudzo kunze kwekungwarira mukufamba kwaunogadzira mukati megore rino.
Zvisinei, unogona kusarudza iyo zvikamu zvinonyanya kukura uye kuenderera pamwe nekuwedzera uku kuratidza yavo huru stock indices. Kubva pane ino mamiriro akanakira kudzivirira zvaunofarira sediki uye wepakati investor, chiyero chekutanga chaunofanirwa kuita chinoenderana nekusarudza akanakisa zvikamu. Pakati pavo, vese avo vane hukama nekushandisa vanomira. Pasina kukanganwa zvikamu zvakabatana nemasevhisi zvinhu uye mapoka emari. Hazvishamisi kuti, vanogona kuzvibata zvirinani kupfuura vamwe vese izvozvi.
Dzimwe nzira dzekudyara munyika ino
Vamwe varimi vanogona kunge vachinetseka nekudyara mari yavo mumusika uno wakakosha. Yakanaka kune yako kusaziva kwemisika yemari iyi kana nekuda kwekuti ivo vanofanirwa kushandura marongero avo ekudyara kumativi. Chero zvazvingaitika, havazove nematambudziko ekuvhura nzvimbo mumusika wepasi rose wekukosha kwakakosha mumakore achangopfuura. Nekuti zvazviri, ivo vanogona kusarudza zvimwe zvigadzirwa zvemari pane kutenga nekutengesa zvikamu zvavo zvakananga pamusika wemasheya.
Mhinduro kumatambudziko aya inoendeswa kuburikidza ne Investment funds zvichibva paiyi mari inoshanduka yatiri kutaura nezvayo. Makambani ekuwedzera uye mazhinji manejimendi akasarudza kupa vatengi vavo mamodheru ehunhu uye vane pundutso yakaputika mumakore apfuura. Uye zvakare, inogona kuve yakasiyanasiyana nekubatanidzwa pamwe nezvimwe zvinhu zvemari. Ose akagadziriswa mari uye mari inoshanduka kana mamwe mafomati ekuti ape vimbiso huru kune vatori vechikamu vemari iyi.
Imwe yemabhenefiti akajeka ekusarudza iyi modhi yekudyara yakavakirwa pachokwadi chekuti njodzi yakatarwa nevatengesi vadiki nepakati ichave yakaderera zvikuru. Semhedzisiro yekushandisa iyi yakasarudzika zano, kurasikirwa hakuzove kwakakura kunge kumusika wemasheya. Kunyangwe pane zvinopesana, zviwanikwa zvichashomeka zvinoshamisa zvine chekuita nenzvimbo dzakatorwa kuburikidza nemisika yemasheya. Iine huwandu hwakawanda hwemari dzekudyara dzinozogutsa kudiwa kweava investor.
Matipi ekudyara muIndia
Kana iwe uchifarira kunongedza uyu musika wezvemari weAsia, iwe unofanirwa kuisa akateedzana ekurudziro kuitira iyo mari kuti ikure nemazvo. Imwe yeinonyanya kubatsira ndeyekuti iwe unofanirwa nyatso ziva nezve shanduko yemasheya indices. Kune rimwe divi, sezvo njodzi dzacho dziri huru, haufanire kuisa midziyo yako yese mune ino yehupfumi mari. Edza kuzvisiyanisa nezvimwe zvigadzirwa zvemari kana kunyangwe nezvimwe zvakajairika kuchinjaniswa kupfuura izvi. Izvo zvakaringana kuti iwe unogovera yakashomeka chikamu yezvese zvaunochengeta.
Chimwe chiyero chekuti hapazove nesarudzo kunze kwekutora icho chiri kureva izvo zvekuti unofanirwa kusiya zvigaro mumusika uyu apo dzimwe dzetsigiro dzakanyanya kukosheswa. Uye zvechokwadi kana maIndia equities achinja maitiro. Ichi chichava chiratidzo chinonyatso kuoneka chekuti haufanire kugara chero mazuva nekudyara. Iwe haugone kukanganwa kuti uyu musika wezvemari unozivikanwa nekusagadzikana kwaro kukuru. Pamusoro pechinyakare kana zvakajairika. Iwe haufanire kuisa panjodzi mari yako ndiyo yakakosha.
Kune rimwe divi, zvichave zvakare zvine hungwaru kushandisa nyanzvi mumisika iyi kunyatsogadzirisa yako portfolio. Ichave iyo iri yakajeka nezve iyo nguva iwe yaunofanirwa kupinda kana kubuda uyu musika wemari. Iyo inogona kutokupa imwe imwe nzira kuitira kuti iwe ugone kuita kuti nzvimbo dzako dziwane purofiti zvinobudirira zvakanyanya. Izvo hazvizokudhara iwe chero chinhu uye pachinzvimbo pane zvakawanda mabhenefiti iwe aunogona kuwana kubva ikozvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » India: mukana wemari